माइजुकी भदैनीले लजाउदै भनिन् – छ्या, मलाई तपाई भन्न पर्दैन .. – AB Sansar
November 9, 2020 adminLeaveaComment on माइजुकी भदैनीले लजाउदै भनिन् – छ्या, मलाई तपाई भन्न पर्दैन ..
दशैँको टिकाको दिन। आफ्नो घरमा टिका लगाएपछि प्रशन्न मामाको घर नवलपरासी पुग्यो। उ पुग्दा मामाको घरको ढोका खुलै थियो। ‘माईजु!’ बाहिरदेखि नै कराउँदै उ भित्र पस्यो। भित्र माईजु त हुनुहुन्थेन तर भान्सामा काम गरिरहेकी एउटी नवयौवना थिइन्। अपरिचित। पहिले कहिल्यै नेदेखेको। ‘माइजु हुनुहुन्न?’ ‘तँपाई प्रशन्न हो?’ अपरिचित केटीबाट उल्टै प्रश्न आयो। प्रशन्न छक्क पर्‍यो।’हो, तर तँपाईलाई कसरी थाहा भयो? ‘ ‘ ***** थप यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’***,
छ्या, मलाई तपाई भन्न पर्दैन। तिमी भने हुन्छ। तपाई भन्दा सानै छु।’ ‘ल ठिक छ, तिमी नै भन्छु । तिमीलाई मेरो उमेर पनि थाहा रहेछ । अरु के थाहा छ मेरो बारेमा?’ ‘तँपाई, सायद बिएस्सी अन्तिम वर्षमा पढ्दै हुनुहुन्छ, त्रिचन्द्र कलेजमा।’ ‘वाह, अनि?’ ‘घर पूर्व–चितवन ।’अनि? पढाइमा तेज हुनुहुन्छ।’ तिमी त मलाई बेचेर खान्छौ कि क्या हो?’ बेच्ने त होईन, बन्धकसम्म राख्न सक्छु’, उनी हाँसिन् । अनि आफ्नो बारेमा चाँहि भन्नु पर्दैन? पत्ता लगाउनूस् न।’ उनी खित्खिताएर हाँसिन्, अनि भान्साको काममै लागिन्। पूर्णिमा, ए पूर्णिमा !’ बाहिर माईजुको आवाज आयो। बाख्राहरुलाई पानी देऊ त नानी !’
सबैलाई लोभ्याउने सफलता : श्रीमान सिडियो , श्रीमती सहायक सिडियो